Sirdoonka Masar oo xabsiga dhigay nin Soomaaliya ah oo lagu tuhunsan yahay……. – SBC
Sirdoonka Masar oo xabsiga dhigay nin Soomaaliya ah oo lagu tuhunsan yahay…….
Ciidamada amaanka wadanka Masaarida ayaa ka qabtey garoonka caalamiga ah ee diyaaradaha magaalada Qaahira nin Soomaali ah oo la sheegay in uu ka tirsan yahay kooxaha maleeshiyaadka ka dagaalamaya Soomaaliya.
Ninkan ayaa ciidamada amaanka ee Masaaridu waxay ku sheegeen magaciisa Yuusuf Hasan waxaana uu kayimid wadanka Morocco markii la qabanayey.
Wargeyska Al-Masry Al-Youm ee ka soo baxa magaalada Qaahira ayaa qorey in ciidamada NSS-ta (National Security Service) Masaarida ay sheegeenin ninkan lagu qabtey Baasabooro fara badan oo ah kuwa Diblumaasiyiinta Qaradama Midoobay (U.N. diplomatic Passports).
Ilo dhanka mukhaabaraadka ayaa u sheegay wargeyska in ninkan uu sitey 15 baasaboor ah oo kuwa been abuur ah oo ay kuwa ay ku safraan saraakiisha Qaramada Midoobay, waxaana la sheegay in sidoo kale uu sagaal tigidhada diyuuradaha kuwaasi oo ah tigidho meelo kala duwan safarkoodu ahaa.
Saraakiishu waxay sheegeen in arintan ay la macno tahay sida ay sheegeen qaabkii uu u dhacay weerarkii 9/11 ee sanadkii 2011-kii diyaarado la afduubay lagu burburiyey xarumo muhiim ah oo ku yaal magaalooyinka New York & Washington ee wadanka Mareykanka.
Ma jirto ilaa iyo hada cid madaxbanaan oo xaqiijinaya eedeymaha iyo tuhunka ninkan Soomaaliga ah lagu haysto, iyadoo ciidamada amaanka Masaarida ay baaritaan ku hayaan ninkan iyo inuu xiriir la leeyahay Al-Qaacida.
Si kastaba ha ahaatee weerarkii todobaadkii hore ka dhacay Bar ku yu yaal wadanka Moroco ayaa ciidamada amaanku waxay ku eedeyeen in Al-Qaida ay ku lug laheyd in kastoo shabakada Al-Qaacida garabkeeda maqrib Al Qaeda in the Islamic Maghreb (AQIM) ay beenisay in ay ka dambeysay qaraxaasi oo ay ku dhinteen 17 qof oo 8 ka mid ah u dhalatey dalka Faransiiska halka haweenay u dhaslay dalka Switzerland ay u dhimatey dhaawac soo gaarey.